FIIRSO: Ra’iisul-wasaare Kheyrre oo saaka wacdarro dhigay
Home » WARARKA MAANTA » FIIRSO: Ra’iisul-wasaare Kheyrre oo saaka wacdarro dhigay	FIIRSO: Ra’iisul-wasaare Kheyrre oo saaka wacdarro dhigay
19/04/2017	2,306 Views Warar hordhac ah oo aan helayno ayaa sheegaya in ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyrre uu saaka aroortii tegay xarumaha hoos tega wasaaradda Maaliyadda, halkaas oo uu shaqooyinka ka socda kormeeray.
Xilliga uu ra’iisul-wasaaruhu tegayay wasaaradda ayaa ahaa xilli hore oo aanay shaqadu si toos ah u billaaban, waxaana shaqaalaha wasaaradda kedis iyo lama-filaan ku noqday kormeerka ra’iisul-wasaaraha.
In kasta oo aanay weli warar faah-faahsan ka soo bixin kormeerka ra’iisul-wasaaraha, haddana waxaa la soo sheegayaa in uu mudane Xasan Cali Kheyrre indha-indheeyay shaqada socota, isla markaana dhegeystay warbixinno ay howlwadeennada wasaaraddu ka siiyeen howsha.
Ra’iisul-wasaaraha ayaa maalmahan waxa uu samaynayay kormeero kedis ah oo uu kaga dultegayo shaqaalaha wasaaradaha xilli aanay filanayn, isaga oo sababta kormeeradiisa ku sheegay in la isla-xisaabtamo oo la dardargeliyo shaqooyinka socda.
Wixii ku soo kordha arrintan dib ayaa aad kala socon doontaan, idam alle.
Previous: Ciidanka Sucuudiga oo musiibo weyn ay qabsatay
Next: Jawaari oo war ay ku qancaan u sheegay xildhibaannada diiddan Imaaraadka